इंग्लिस ब्याट्सम्यानद्वारा अस्ट्रेलियन बलरको ‘रामधुलाई’, इंग्ल्याण्ड फाइनल नजिक, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
इंग्लिस ब्याट्सम्यानद्वारा अस्ट्रेलियन बलरको ‘रामधुलाई’, इंग्ल्याण्ड फाइनल नजिक
एजेन्सी । इंग्ल्यान्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा इंग्ल्याण्डले शानदार प्रदर्शन गरेको छ।
जितका लागि २२४ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्याण्डले १७.२ ओभरमा १२४ रन बनाएर १ विकेट गुमाएको छ। इंग्ल्याण्डका ओपनर ज्यासन रोयले ६१ बलमा ७९ रन बनाएर खेलेका छन् भने अर्का ओपनर जोनी बेयरस्ट्रोले ४३ बलमा ३४ रन बनाएर आउट भए। बर्मिंघममा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अष्ट्रेलियाले ४९ ओभरमा अलआउट हुँदै २२३ रन बनाएको थियो ।
अष्ट्रेलियाका लागि स्टिभ स्मिथले सर्वाधिक ८५ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । खराब सुरुवात गरेको अष्ट्रेलियाले मात्र १५ रन जोड्दा ३ विकेट गुमाएको थियो । तर, पूर्व कप्तान स्मिथले चौथो विकेटका लागि एलेक्स केरीसँग १०३ रनको साझेदारी गर्दै टिमको इनिङ्स उकासेका थिए । केरी ४६ रनमा आउट भए ।
यस्तै अष्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्कले २९ र ग्लेन म्याक्सवेलले २२ रनको योगदान गरे । अन्य खेलाडीले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् ।
अष्ट्रेलियालाई सस्तैमा समेट्न इंग्ल्याण्डका क्रिस वोक्स र आदील रशिदले समान ३÷३ विकेट हात पारे । जोफ्रा आर्चरले २ विकेट लिए ।
यी दुई टोलीबीचको विजेताले उपाधिका लागि न्युजिल्याण्डसँग खेल्नेछन्